Ma qaybta xubnaha mise taageerayaasha Somaliska? | Somaliska
Ka dib qiimeyn dheer ayaan waxaan go’aansanay in Qaybta xubnaha ee aan ku soo dari lahayn Somaliska aan hakino ka dib markii ay noo soo baxday in dadka qaar aysan fahansaneyn sida looga midnoqdo waloow ay doonayaan in ay qarashka bixiyaan.
Inkastoo ay wali jirto baahidii aan markii hore u go’aaminay arintaan ayaan go’aansanay in aan ka dhigno tabarucaad oo keliya, iyadoo qofkii jecel in uu taageero hawlaha bogga uu noo soo diri karo tabarucaadiisa.
Adeegyadii aan balan qaadnay ayaan bogga ku soo dari doonaa iyagoo u furan dhamaan akhristayaasha, waxaan siyaadin doonaa wararka aan qorno, waxaan furi doonaa xafiiska Somaliska bisha soo socota ee Juli. Insha Allah
Intii horey u soo dirtay qarashka Qaybta Xubnaha ayaan dib ugu soo celin doonaa, qofkii doonaya waxa uu ula bixi karaa tabarucaada bogga. Mahadsanidiin.
Asc, Jimcaaloow sax waaye hadalkaan danbe waa wanaagsanyahay , balse mida kale miisaanka in hadalka la isku saaray ahayd , inkastoo ay ahayd maalintii ballanta ee aad 4 lanbar noo soo direeysay/ dadka xubinta noqday , balse qabarkaan kale ma waxaa ula jeedaa intii aad ku sheegtay in aan qaybta xubinta ku helayno ayaad soo gelinee sida / Wararka Degdega / Online ka xubnaha / Muuqaalada/Sawirada gaarka ah , iyo dhammaan adeega aad noogo sheegtay xubintu in ay helee ?
Marka Go’aankaan danbe bal yara saxarqaad/haadi oo huf ?
Wsc, abuxudayfah arintaan waan ka fikiray runtii akhristayaasha inta badan way soo dhaweeyeen, diyaar ayayna u ahaayeen in ay ka mid noqdaan xubnaha balse isbuucyadii la soo dhaafay waxaa na wareeriyay telefoono iyo emailo oo qofkasta dalbanayo sidii uu lacagta u soo diri lahaa. Dad aan badneyn ayaa ku guuleystay in ay lacagta soo diraan marka waxaan ku fikiray haddii aan dhowr kaas qof QAYB u sameyno akhristayaasha kalena aan ka xirno waxay noqoneysaa qaab daro.
Balse tabarucaada qasab ma ahan, qofkii jecel isla markaana garanaya sida lacag loo diro ayaa sameyn kara inta kalena qasab kuma ahan. Marka sidaan ayaa igala haboon aniga. Waayo dad badan ayaa diyaar u ah in aay taageeraan hawlaheena.
Arimaha adeegyada – yes waan soo daabici doonaa warar dheeraad ah, waana sii wadi doonaa hawshii hufneyd ee nagala bartay. Qaybtii Chatka macquul ma ahan waayo Xubin ayay u baahantahay. Balse insha Allah si wada jir ah ayaan u qancin doonaa akhristayaasha. Inta taageerada noo soo dirtana waan u mahadcelineynaa.
Asc, Jimcaale walaal si wanaagsan oo saxar la ayaan u fahmay , waana mahadsantahay , tabarucaadana waan ka qaybdaadanaa Alle idinkiis xubinimada waxaan u bixiyayna ha igu soo celin oo shabakadaan ugu taba rucaa si harumarku u baaho , baahida hadda taalayna u bogato.
Inkastoo aan filaa in aan dadka aysan xubin noqon waayin , haddana waxaa hakisay habka lacagta loo diraa , taana waxaan filaa haddii waayo lasii joogo horaa looga galbaxaa, mahadsanid , Jimcaale dadaalkaaga badan inbadanbaa mahadsantahay .
Daad yare says:
A.s.c. Dhaman salan kadib waxan sodhaweynena go aankan dambe ee uqatay jimcale waxana kula talin neynaa dhaman aqrista yasha somaliska gaar ahan inta fahansan qabka lodiro lacakta cawimada ah in ey kaqeb qatan kuwa kale oo jacel in ay cawiyan ey kalasheqeyan sidi ey wax kucawin lahayen
Jimcale wad mahadsantahy go ankan damena ayaan u bognay